Kutadza Kuronga Zvinhu Kwokonzeresa Zvirwere Zvinorapika Nyore
Vagari vemumaguta nemadhorobha, pamwe nenyanzvi vanoti nyaya yekuti vanhu vanoramba vachibatwa nezvirwere zvemanyoka zvakaita setyphoid nekorera zvinoratidza kuti hurumende nemakunzuru hazvisi kushandisa mari zvine mwero kwenguva yakareba.
Hurumende ine mutemo unoti makanzuru anofanirwa kushandisa zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvemabhajeti awo kuita mabasa akaita sekuwanisa vanhu mvura yakachena nekutakura marara uye zvikamu makumi matatu kubva muzana semari yemihoro.
Asi izvi handizvo zviri kuitika sezvo makanzuru mazhinji munyika ave kutotambirisa mari yakakwira kudarika makambani anoshanda akazvimirira.
Semuenzaniso, mukoti wemukanzuru yeHarare anotambira zviuru zviviri nemazana mashanu emadhora asi mukoti anoshandira hurumebde achitambira mazana mashanu emadhora.
Vaimbove meya VeHarare, VaBenard Manyenyeni, vanoti nyaya yemihoro yevashandi ndiyo yauraya kanzuru yeHarare.
VaManyenyeni vanoti kanzuru iyi haigoni kuita basa rayo nekuda kwenyaya iyi.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare, reHarare Resident Trust, VaPrecious Shumba, vaudza Studio7 kuti hurumende inofanira kumisa zvese izvi yowona kuti mari yemvura yashandiswa mabasa emvura.
Vanotiwo nyaya yehuwori mukanzuru ndiyo iri kuita makanzuru aya atadze kutakura marara nekupa vanhu mvura yakachena izvo zvinokonzera kuwanda kwetsvina nezvirwere zvemudumbu.
VaManyenyeni vanotiwo nyaya yekuti hurumende, vagari nemakambani havasi kubhadhara mitero inoomeserawo kunzuru nekuitadzisa kuita mabasa ayo zvinozopedzisira zvakonzera zvirwere zvakaita sekorera.
Mutauriri wekanzuru, VaMichael Chideme, vanoti havadi kuti vagari vabatwe nezvirwere, uye zvakakosha kuti vanhu vabhadhare mitero kuitira kuti kanzuru ikwanise kuivaitira zvese zvakaita sekuvapa mvura yakachena.
MuHarare nemamwe madhorobha vanhu vanogara vakabatwa nezvirwere zvinokonzerwa netsvina nekushaikwa kwemvura yakachena nekusatakurwa kwemarara.
Iko zvino pane vanhu makumi mana nemapfumbabwe vafana nechirwere korera uye hurumende yave kuita chipata pata chekutsvaga rubatsiro kuti ikwanise kurapa nekumisa kupararira kwechirwere.
Mukuru wezvirwere zvekutapurirana mubazi rezvehutano, Dr Portia Manangazira, vanoti zvirwere zvekorera netyphoid zvave kunetsa kurapika zvopa kuti vape vanhu nhomba kuti vasatapurirwe chirwere ichi.
VaManyenyeni nenyanzvi munyaya dzehupfumi, VaMasimba Manyanya, vanoti mafambisirwe ari kuitwa hurumende handiwo vachiti nyika haingararame nekupemha.
Vanoti hurumende nemakanzuru vanofanira kugara vaine mari parutivi yekubatsira kana pachange paita dambudziko rakaita sekorera.
Tsvagiridzo ichangobva mukuitwa neUniversity of Zimbabwe, inoratidzawo kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvakakanganisawo zvikuru mabasa ezvehutano munyika.
Zvakabuda mutsvakiridzo iyi, iyo yakaitirwa bazi rezvedzidzo yepamusoro neUniversity of Zimbabwe, zvinoratidza kuti mari yerubatsiro kunyika nemakanzuru munyika yakadzikira nekuda kwezvirango uye kuti mitengo yezvinhu nemabasa yakakwirawo zvakanyanya.
Tsvagiridzo iyi inotiwo hurumende nemakanzuru vanofanira kutsvaga nzira dzekukunganidza mari muno kwete kumirira vekunze.
Nyika dzakawanda nemasangano ekunze nemakambani akazvimira ndivo vari kubatsira zvakanyanya mukurwisana nekokera pamwe nekubatsira makanzuru kuita mabasa ekuwanisa vanhu mvura pamwe nekutakura marara.